FR : https://www.hebergementwebs.com/education/comment-lifetown-une-ville-simulee-du-new-jersey-aide-les-enfants-autistes
EN : https://www.hebergementwebs.com/education/how-lifetown-a-simulated-town-in-new-jersey-helps-children-with-autism
ES : https://www.hebergementwebs.com/educacion/como-lifetown-una-ciudad-simulada-en-nueva-jersey-ayuda-a-los-ninos-con-autismo
HR : https://www.hebergementwebs.com/obrazovanje/kako-zivot-simulirani-grad-u-novom-dresu-pomaze-autisticnoj-djeci
DE : https://www.hebergementwebs.com/bildung/wie-lebensstadt-eine-simulierte-stadt-in-new-jersey-hilft-autistischen-kindern
ET : https://www.hebergementwebs.com/haridus/kuidas-simuleeritud-linn-uues-jersey-linnas-aitab-autiste-lapsi
BN : https://www.hebergementwebs.com/শিক্ষা/কীভাবে-লাইফটাউন-এ-সিমুলেটেড-শহরে-নতুন-জার্সি-সাহায্য-অটিস্টিক-বাচ্চাদের
AF : https://www.hebergementwebs.com/onderwys/hoe-lewensdorp-n-gesimuleerde-stad-in-nuwe-trui-help-outistiese-kinders
BS : https://www.hebergementwebs.com/obrazovanje/kako-zivot-simulirani-grad-u-novom-dresu-pomaze-autisticnoj-djeci
GD : https://www.hebergementwebs.com/foghlam/how-lifetown-a-simulated-town-in-new-jersey-help-autistic-clann
DA : https://www.hebergementwebs.com/uddannelse/hvordan-livsby-en-simuleret-by-i-ny-trøje-hjælper-autistiske-børn
BG : https://www.hebergementwebs.com/образование/how-lifeetown-a-simulirano-town-in-new-jersey-помага-аутисти-деца
FA : https://www.hebergementwebs.com/تحصیلات/how-lifetown-a-simulated-town-in-new-jersey-به-کودکان-اوتیسم-کمک-می-کند
HT : https://www.hebergementwebs.com/edikasyon/ki-jan-lifetown-yon-simulation-vil-nan-nouvo-jersey-ede-otis-timoun-yo
BE : https://www.hebergementwebs.com/адукацыя/як-жыццё-мадэлюецца-горад-у-Нью-Джэрсі-дапамагае-дзецям-аўтыстам
CA : https://www.hebergementwebs.com/educació/com-lifetown-una-ciutat-simulada-en-jersey-nou-ajuda-als-nens-autistes
CO : https://www.hebergementwebs.com/educazione/cumu-lifetown-una-cita-simulata-in-novu-jersey-aiuta-i-zitelli-autisti
EU : https://www.hebergementwebs.com/hezkuntza/nola-lifetown-batek-maillot-berria-duen-herri-simulatu-bati-laguntzen-die-haur-autistei
EO : https://www.hebergementwebs.com/edukado/kiel-vivurbo-simulis-urbon-en-novan-jerzon-helpas-autismajn-infanojn
EL : https://www.hebergementwebs.com/εκπαίδευση/πώς-ζωή-ένα-προσομοιωμένο-πόλη-σε-νέο-Τζέρσεϋ-βοηθά-αυτιστικά-παιδιά
GA : https://www.hebergementwebs.com/oideachas/conas-lifetown-a-insamhalta-town-in-new-jersey-help-autistic-children
ID : https://www.hebergementwebs.com/pendidikan/how-lifetown-a-simulated-town-in-new-jersey-membantu-anak-anak-autis
HU : https://www.hebergementwebs.com/oktatás/hogyan-lehet-egy-varosban-uj-varosban-szimulalni-az-autisztikus-gyerekeket
AM : https://www.hebergementwebs.com/ትምህርት/እንዴት-ሊቪቲቫቲ-አንድ-አስመስሎ-በከተማ-ውስጥ-በኒው-ጀርሲ-ኦቲዝም-ሕፃናትን-ይረዳል
GU : https://www.hebergementwebs.com/શિક્ષણ/નવી-જર્સી-મદદ-ઓટીસ્ટીક-બાળકો-કેવી-જીવન-ટાઉન-સિમ્યુલેટેડ-ટાઉન
FI : https://www.hebergementwebs.com/koulutus/kuinka-simuloitu-kaupunki-uudessa-jersey-elamassa-auttaa-autistisia-lapsia
HA : https://www.hebergementwebs.com/ilimi/yadda-lifetown-a-kwaikwayo-gari-a-cikin-sabbin-zane-ya-taimaka-yara-masu-kananan-yara
AR : https://www.hebergementwebs.com/التربية/كيف-لايف-تاون-أ-محاكاة-بلدة-في-نيو-جيرسي-يساعد-الأطفال-المصابين-بالتوحد
CS : https://www.hebergementwebs.com/vzdělání/jak-zivotni-mesto-simulovane-mesto-v-novem-dresu-pomaha-autistickym-detem
AZ : https://www.hebergementwebs.com/təhsil/yeni-forma-suni-qəsəbə-necə-bir-omur-səhər-otistik-usaqlara-komək-edir
CY : https://www.hebergementwebs.com/addysg/sut-lifetown-a-efelychiad-tref-yn-newydd-jersey-helpu-awtistig-plant
HE : https://www.hebergementwebs.com/חינוך/איך-עיר-חיים-מדומה-עיר-בג-רזי-חדש-עוזר-לילדים-אוטיסטים
FY : https://www.hebergementwebs.com/oplieding/hoe-libbenssted-in-simileare-sted-yn-nije-trui-helpt-autistyske-bern
GL : https://www.hebergementwebs.com/educación/como-lifetown-unha-cidade-simulada-en-nova-xersei-axuda-aos-nenos-autistas
IT : https://www.hebergementwebs.com/formazione-scolastica/come-lifetown-una-citta-simulata-nel-new-jersey-aiuta-i-bambini-autistici
KO : https://www.hebergementwebs.com/교육/뉴저지에있는-시뮬레이션-된-마을이-자폐아를-돕는-방법
PL : https://www.hebergementwebs.com/edukacja/jak-zycie-miasto-symulowane-miasto-w-nowej-koszulce-pomaga-dzieciom-z-autyzmem
MS : https://www.hebergementwebs.com/pendidikan/bagaimana-kehidupan-a-simulasi-bandar-di-baru-jersi-membantu-autistik-kanak-kanak
RU : https://www.hebergementwebs.com/образование/как-лайфтаун-симулированный-город-в-Нью-Джерси-помогает-детям-аутистам
LB : https://www.hebergementwebs.com/ausbildung/wei-lifetown-eng-simuleiert-stad-an-new-trikot-helleft-autistesch-kanner
NL : https://www.hebergementwebs.com/onderwijs/how-lifetown-a-simulated-town-in-new-jersey-helpt-autistische-kinderen
PA : https://www.hebergementwebs.com/ਸਿੱਖਿਆ/ਨਵੇਂ-ਜਰਸੀ-ਇਨ-isticਟਿਸਟਿਕ-ਬੱਚਿਆਂ-ਵਿਚ-ਕਿਵੇਂ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਇਕ-ਸਿਮੂਲੇਟ-ਕਸਬੇ
IS : https://www.hebergementwebs.com/menntun/hvernig-bjorgunarstaður-hermir-bær-i-nyja-treyju-hjalpar-einhverfum-bornum
PT : https://www.hebergementwebs.com/educação/como-a-vida-cidade-simulada-em-nova-jersey-ajuda-criancas-autistas
MR : https://www.hebergementwebs.com/शिक्षण/नवीन-जर्सी-मदत-ऑटिस्टिक-मुलांना-कसे-लाइफटाऊन-ए-सिमुलेटेड-शहर
RO : https://www.hebergementwebs.com/educaţie/cum-lifetown-un-oraș-simulat-in-new-jersey-ajuta-copii-autiști
SD : https://www.hebergementwebs.com/تعليم/ڪئين-زندگي-هڪ-تخليقي-ڳوٺ-۾-نئين-جرسي-مددگار
LV : https://www.hebergementwebs.com/izglītība/ka-simuleta-pilseta-jaunaja-krekla-palidz-autistiem-berniem
KA : https://www.hebergementwebs.com/განათლება/როგორ-ეხმარება-აუტისტ-ბავშვებს-სიცოცხლის-ქალაქი-იმიტირებული-ქალაქი-ნიუ-ჯერსიში
SI : https://www.hebergementwebs.com/අධ්යාපන/how-lifetown-a-sim-town-in-new-jersey-help-autistic-children
KN : https://www.hebergementwebs.com/ಶಿಕ್ಷಣ/ಹೌ-ಲೈಫ್ಟೌನ್-ಎ-ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್-ಟೌನ್-ಇನ್-ನ್ಯೂ-ಜರ್ಸಿ-ಸಹಾಯ-ಸ್ವಲೀನತೆ-ಮಕ್ಕಳು
RW : https://www.hebergementwebs.com/uburezi/burya-ubuzima-bwose-bwigana-umujyi-muri-jersey-ifasha-autistic-abana
LT : https://www.hebergementwebs.com/švietimas/kaip-imituotas-miestas-naujame-marskinelyje-padeda-autistams-vaikams
NY : https://www.hebergementwebs.com/maphunziro/momwe-mzinda-watsopano-wa-mzinda-watsopano-jersey-wothandiza-autistic-ana
MT : https://www.hebergementwebs.com/edukazzjoni/kif-lifetown-belt-simulata-fi-jersey-gdida-tghin-tfal-awtistici
PS : https://www.hebergementwebs.com/زده-کړه/how-lifetown-a-simula-in-in-new-جرسي-د-اوټیسټ-ماشومانو-سره-مرسته-کوي
ML : https://www.hebergementwebs.com/വിദ്യാഭ്യാസം/ഹ-ലൈഫ്-ട-own-ൺ-എ-സിമുലേറ്റഡ്-ട-town-ൺ-ഇൻ-ന്യൂ-ജേഴ്സി-ഓട്ടിസ്റ്റിക്-കുട്ടികളെ-സഹായിക്കുന്നു
JA : https://www.hebergementwebs.com/教育/how-lifetown-a-simulated-town-in-new-jersey-helps-autistic-children
IG : https://www.hebergementwebs.com/mmuta/esi-lifetown-a-kpochapụrụ-obodo-ọhụrụ-na-jersey-enyere-autistic-ụmụ
MN : https://www.hebergementwebs.com/боловсрол/амьдралын-өмч-хот-шинэ-өмсгөлийн-дууриамал-хот-аутист-хүүхдүүдэд-хэрхэн-тусалдаг
KY : https://www.hebergementwebs.com/билим-берүү/Жаңы-Джерсидеги-жасалма-шаар-кантип-жашоо-шаар-аутист-балдарга-жардам-берет
KK : https://www.hebergementwebs.com/білім-беру/қалай-өмір-қалашығы-жаңа-джерси-модельденген-қала-аутист-балаларға-көмектеседі
NO : https://www.hebergementwebs.com/utdanning/hvordan-livsby-en-simulert-by-i-ny-jersey-hjelper-autistiske-barn
OR : https://www.hebergementwebs.com/ଶିକ୍ଷା/କିପରି-ଲାଇଫଟାଉନ୍-ଏକ-ସିମୁଲେଡ୍-ଟାଉନ୍-ଇନ୍-ନୂଆ-ଜର୍ସି-ସାହାଯ୍ୟ-ଅଟିଷ୍ଟିକ୍-ପିଲାମାନେ-|
VI : https://www.hebergementwebs.com/giáo-dục/how-life-a-simulated-town-in-new-jersey-help-autistic-children
UK : https://www.hebergementwebs.com/освіта/how-lifetown-a-імітація-місто-в-Нью-Джерсі-допомагає-аутистам-дітям
TR : https://www.hebergementwebs.com/eğitim/nasil-lifetown-simule-edilmis-new-jersey-in-town-otistik-cocuklara-yardimci
TT : https://www.hebergementwebs.com/мәгариф/ничек-тормыш-шәһәр-симуляцияләнгән-шәһәр-яңа-джерси-ярдәмче-аутистик-балалар
TH : https://www.hebergementwebs.com/การศึกษา/how-lifetown-a-simulated-town-in-new-jersey-help-autistic-children
SL : https://www.hebergementwebs.com/izobraževanje/kako-zivljenje-simulirano-mesto-v-novi-majici-pomaga-avtisticnim-otrokom
SV : https://www.hebergementwebs.com/utbildning/hur-livsstaden-en-simulerad-stad-i-ny-troja-hjalper-autistiska-barn
ZU : https://www.hebergementwebs.com/imfundo/idolobha-elisha-ijezi-elisha-lisiza-kanjani-izingane-kanjani
UG : https://www.hebergementwebs.com/مائارىپ/قانداق-قىلىپ-ھاياتلىق-تەقلىد-قىلىنغان-شەھەر-بازار-يېڭى-كىيىم-كېچەكلەر-ئاپتوماتىك-بالىلارغا-ياردەم-بېرىدۇ
SW : https://www.hebergementwebs.com/elimu/jinsi-mji-wa-maisha-mji-ulioiga-jezi-mpya-jezi-husaidia-watoto-autistic
SK : https://www.hebergementwebs.com/vzdelanie/how-lifetown-a-simulated-town-in-new-jersey-helps-autistic-children
ST : https://www.hebergementwebs.com/thuto/joang-life-own-a-etsisa-toropo-ka-e-ncha-jesi-thusa-autistic-bana
SN : https://www.hebergementwebs.com/dzidzo/sei-hupenyu-hwetown-a-simulated-town-in-new-jersey-inobatsira-autistic-vana
SO : https://www.hebergementwebs.com/waxbarasho/how-lifetown-a-jilid-magaalo-cusub-oo-funaanad-ka-caawisay-carruurta-autistic-ka-ah
ZH-TW : https://www.hebergementwebs.com/教育/新澤西州的模擬城鎮如何幫助孤獨症兒童
TA : https://www.hebergementwebs.com/கல்வி/எப்படி-வாழ்நாள்-ஒரு-உருவகப்படுத்தப்பட்ட-நகரம்-புதிய-ஜெர்சி-உதவுகிறது-ஆட்டிஸ்டிக்-குழந்தைகள்
XH : https://www.hebergementwebs.com/imfundo/njani-idolophu-yokuphila-idolophu-entsha-ijezi-inceda-abantwana-abazenzekelayo
UR : https://www.hebergementwebs.com/تعلیم/نیو-جرسی-میں-آٹسٹک-بچوں-میں-کس-طرح-زندگی-گزارنے-والا-ایک-تخلیقی-قصبہ-ہے
TE : https://www.hebergementwebs.com/చదువు/హౌ-లైఫ్-టౌన్-ఎ-సిమ్యులేటెడ్-టౌన్-ఇన్-న్యూ-జెర్సీ-సహాయపడుతుంది-ఆటిస్టిక్-పిల్లలు
YO : https://www.hebergementwebs.com/eko/bawo-ni-lifetown-a-ṣe-ṣe-awopọ-ilu-ni-tuntun-jersey-ṣe-iranlọwọ-awọn-ọmọde-autistic
SQ : https://www.hebergementwebs.com/edukimi/si-ndihmon-femijet-autike-ne-qytetin-e-simuluar-ne-xhersi-te-ri
YI : https://www.hebergementwebs.com/חינוך/ווי-ליפעטאָוון-אַ-סימיאַלייטיד-שטאָט-אין-ניו-דזשערזי-העלפּס-אָטיסטיק-קינדער
TG : https://www.hebergementwebs.com/маориф/чӣ-гуна-умри-шаҳр-як-тақлидшуда-шаҳр-дар-Ҷерсӣ-кӯмак-ба-autistic-кӯдакон
UZ : https://www.hebergementwebs.com/ta'lim/qanday-qilib-hayot-shahar-yangi-jersi-taqlid-qilingan-shahar-autistik-bolalarga-yordam-beradi
Rabbi Zalman Grossbaum သည်အကျိုးအမြတ်မယူသောပညာရေးနှင့်အပန်းဖြေရေးစင်တာ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ အကျိုးအမြတ်များသော၊ ဂိုဏ်းဂဏမရှိသော ၅၃၀၀၀ စတုရန်းပေကလေးများနှင့်လူကြီးများကိုနယူးဂျာစီရှိ Livingston တွင်အထူးလိုအပ်ချက်များရှိသည်။
Rabbi Zalman Grossbaum နှင့်သူ၏ဇနီး Toba Grossbaum, အထူးပညာရေးပညာရှင်တို့သည်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသောသူများ၏သုခချမ်းသာနှင့်အနာဂတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ပတ် ၀ န်းကျင်အားအားပေးအားမြှောက်ပြုရန်အစပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က Friendship Circle အစီအစဉ်မှစတင်ခဲ့ပြီးဆယ်ကျော်သက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုအထူးလိုအပ်ချက်များရှိသည့်ကလေးများနှင့်မိတ်ဖက်ပြုရန်၊ လူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုနှင့်ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းများပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ မိဘများ၊ စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်း၏တုန့်ပြန်မှုသည်များပြားလှပါသည်အလှူရှင် ၅၀၀၀ ကျော်ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၁၉ သန်းရရှိပြီးဖြစ်သော LifeTown စီမံကိန်းကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
စင်တာ၏အဓိကအချက်အချာနေရာမှာကျောင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ပညာပေးသူများကကျောင်းသားများကိုလုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်ဘဝစွမ်းရည်များကိုလေ့ကျင့်ရန် ဦး ဆောင်သည့်မြို့တွင်း၌ဖန်တီးထားသောမြို့ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျောင်းသားများသည်ဘဏ်တစ်ခုသို့သွားနိုင်သည်၊ အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံထုတ်ယူနိုင်ပြီးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်သောစတိုးဆိုင် ၁၅ ခုတွင်ဈေးဝယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖုံးလွှမ်းထားသောပန်းခြံတစ်ခု၊ လှပသောအားကစားရုံ၊ အထူးအသံချဲ့စက်များတပ်ဆင်ထားသည့်အပြင်ဘက်စုံအာရုံခံရှာဖွေရေးအခန်းတစ်ခန်း၊ ကခုန်ခန်းမ၊ ကျနော်တို့ကဘိုးလင်းလမ်းကြားတစ်ခုကိုဆောက်ပြီးလက်လှမ်းမမီတဲ့ရေကန်တစ်ခုပြီးအောင်လုပ်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် NFL နှင့်နယူးယောက်ဂျက်လေယာဉ်များတည်ဆောက်ပေးသောဘောလုံးကွင်းရှိသည်။
LifeTown သည်အထူးလိုအပ်ချက်များရှိသူများအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကမ္ဘာကြီးထဲဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ လူများသည်ဤနေရာတွင် LifeTown တွင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကြောင့်၎င်းသည်ပြင်ပကမ္ဘာရှိလူအားလုံး၏ဘဝကိုသဘာဝကျစေသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၁ နှစ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၇၀၀၀ ကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုခဲ့ပြီးရာနှင့်ချီသောသူတို့သည်အထူးပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောနယ်ပယ်များတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။
ဗဟိုသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာများများပြားစေသည်။ LifeTown သည် Neurodiverse ၏ဆယ်ကျော်သက်များအားအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုများလေ့လာရန်ကူညီပေးပါသလား။
Grossbaum: အရွယ်ရောက်ပြီးသူကမ္ဘာသို့ကူးပြောင်းခြင်းသည် neurodiverse ကျောင်းသားများနှင့်သူတို့၏မိဘများအတွက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ LifeTown သည်ကလေးငယ်များကိုဤကမ္ဘာကြီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ခွင့်နှင့်လွတ်လပ်မှုပိုမိုရရှိရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ အသက်ကြီးသောကျောင်းသားများအတွက် LifeTown သည်စစ်မှန်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးစွမ်းရည်ကို assem ပေးသည်ပန်းစည်းများရိုက်ခြင်း၊ လက်မှုပညာများကိုဖန်တီးပေးခြင်း၊ ality ည့်ဝတ်ပြုခြင်းစွမ်းရည်များကိုလေ့လာခြင်း။ ဤအရာအားလုံးသည်စစ်မှန်သောအလုပ်သို့အလွယ်တကူဘာသာပြန်နိုင်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းသည်အရေးကြီးသော်လည်းလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရန် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ အခြားလူများကဲ့သို့ပင် neurodiverse တစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏အလုပ်ကိုထူးခြားစေလိုသည်။ သူတို့လုပ်သားအင်အားနှင့်ပူးပေါင်းပါကရှုထောင့်အသစ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအသင်း ၀ င်ဖြစ်လိုသည့်ဆန္ဒကိုယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်လုပ်အားအင်အားနှင့်ရပ်ရွာလူထု၏ယဉ်ကျေးမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ Brodsky: LifeTown ၏ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုကြောင့်လူအများအပြားသည်၎င်းတို့အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ဤကဲ့သို့သောစင်တာမျိုးထားလိုကြသည်။ ဒီ ဦး တည်ချက်အတွက်ပထမခြေလှမ်းကဘာလဲ။ Grossbaum: လူတိုင်းကသူတို့ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ Covid အပြန်အလှန်၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်လူမှုရေးသည်အထူးလိုအပ်ချက်များရှိသူများအတွက်သာမကသက်ကြီးရွယ်အိုများကဲ့သို့တစ် ဦး တည်းနေထိုင်သောအခြားသူများအတွက်လည်းဖြစ်သည်။ သင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သောလူအချို့သည်လူမှုရေးအရအထီးကျန်ဖြစ်နေနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုအထီးကျန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ရန်မှာ“ မင်္ဂလာပါ” ဖြစ်သည်။ နှင့်ဖော်ရွေအပြုံး။ အသေးငယ်ဆုံးကြင်နာမှုအမူအရာပင်လျှင်အပြုသဘောဖြင့်ကူးစက်တတ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူများအားသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထိုအခါငါပေးသောသူသည်လက်ခံသူထက်ပိုပြီးအနိုင်ရသည်မှာသေချာသည်။ သင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲသည့်အခါ၎င်းသည်သင့်ကိုလည်းပြောင်းလဲစေပါသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလမ်းကြောင်းကိုစတင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဒီစကားဝိုင်းကိုရှင်းလင်းမှုအတွက်တည်းဖြတ်ပြီးအကျဉ်းချုံးထားသည်။
ကဗျာများနှင့်မသန်စွမ်းမှုများ - အင်္ဂလိပ်ကျောင်းများသည် covid အချိန်တွင်ပေးပို့သည်
2021-06-20 00:29:26 | ပညာရေး...
ကျောင်းအုပ်ကြီးဘင်ဒေးဗစ်ကဒီသီတင်းပတ်ကိုရှောင်နိုင်ပြီးသူ၏ ၁၁ တန်းကျောင်းသားများနှင့်သူတို့၏မိသားစုအားလုံးကိုစာရေးအကြောင်းကြားရန်အထက်တန်းကျောင်းအဆုံးတွင်ခေတ်သစ်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် - ဟိုတယ်ကျောင်းကိုကျင်းပမည့်ဟိုတယ်သည်ကျောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ ၀ န်ကြီးချုပ်၏ကြေငြာချက်အရနောက်ဆုံး ...
ပိုကြီးတဲ့ panties များအတွက်ကျိုးနွံအဆိုပြုချက်ကို
2021-06-18 09:05:26 | ပညာရေး...
ကြီးမားသော panties များကိုပြန်ယူလာပါ။ ငါ 1950 ခုနှစ်ကျောင်းမှာအခါ, ငါတို့စကတ်နှင့်ဆင်မြန်းအောက်မှာ, လွယ်ကူသော, အိတ်နှင့်တူသောရေတပ် panties ဝတ်ဆင်, ငါတို့သစ်ပင်များ, လှည်းနှင့်အရှက်မရှိသော somersaults တက်။ ငါတို့ခါးမှပေါင်ထိပ်အထိကျွန်ုပ်တို့၏တင်ပါးကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စကတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြ...
2021-06-17 18:36:28 | ပညာရေး...
အစိုးရ၏အများပြည်သူသုံးကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့ချိန်ကာလအတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသောသင်ကြားမှုကိုအမီလိုက်နိုင်ရန်ကူညီရန်အစိုးရ၏အဓိကကြိုးပမ်းမှုကိုအင်္ဂလန်ရှိကျောင်းခေါင်းဆောင်များက၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်သုံးစွဲသောသန်းပေါင်းများစွာသောသန်းခေါင်စာရင်းအားပယ်ချလိုက်သည်။ Head of Teachers Associat...
2021-06-16 09:37:35 | ပညာရေး...
အကယ်၍ သင်သည် TED ဆွေးနွေးပွဲများမှအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များနှင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်၏အကောင်းဆုံးတီဗီများ၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးများကိုပြသသည့် Venn ပုံဆွဲထားပါကထပ်တူကျခြင်းသည် MasterClass ဖြစ်သည်။ MasterClass သည်အွန်လိုင်းသင်ကြားရေး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုပို့ချချက်များနှင့်နယ်ပယ်များ...
ကောလိပ်သုံးဆယ်သည် Mackenzie Scott မှတတိယမြောက်လှူဒါန်းမှုများတွင်အဓိကလက်ဆောင်များကိုရရှိသည်
2021-06-16 04:35:45 | ပညာရေး...
Facebook မှမျှဝေပါ Twittered တွင်မျှဝေပါ Linkedin MacKenzie Scott မှပရဟိတအလှူငွေဒေါ်လာ ၂. ၇ ဘီလီယံကျော်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ . . . [+] (ဓာတ်ပုံ Evan Agostini / Invision / AP၊ File) ဓာတ်ပုံ Evan Agostini / Invision / APMacKenzie Scott ကအဖွဲ့အစည်း ၂၈၆ ခုအတွက်ဒေါ်လာ ၂. ၇၃ ဘီလီယံကိုလှူဒါန်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည...
ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်အကြီးအကဲကလူအများအား 'ကျိုးနွံသော' ဘောင်းဘီတိုများဖြင့်အပြစ်ပုံချသည်
2021-06-16 01:54:09 | ပညာရေး...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိကျောင်းများ၏စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည်မူလတန်းကျောင်းရှိစကတ်အောက်ရှိ“ ကျိုးနွံသော” ဘောင်းဘီတိုများ ၀ တ်ဆင်ရန်မိန်းကလေးများအားတောင်းဆိုခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍“ ၀ င်ရောက်အပြစ်တင်ခြင်းခံရသည့်ယဉ်ကျေးမှု” ကိုသတိပေးခဲ့သည်။ ကျောင်းများသည်အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ငယ်သောမိန်းကလေးများအားဘောင်းဘီတိုများကဲ့သို...
ယူကေမိဘများနှင့်ဆရာများ - မင်းကျောင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။
2021-06-15 16:50:38 | ပညာရေး...
မိဘများ၊ ဆရာများနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိကျောင်းမှခေါင်းဆောင်များသည်ကျောင်းအခြေအနေများ၊ စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုများမှသည်လူမှုရေးအကွာအဝေးဆိုင်ရာ protocols များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အသိုင်းအဝိုင်းများ၌ရောဂါကူးစက်မှုများပြားလာခြင်းကြောင့်ပတ် ၀ န်းကျင်စောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်ကျောင်းပိတ်ခြင်းများကိုကြားနာရန်မျှော...
2021-06-15 15:31:50 | ပညာရေး...
Linkedin getty တွင် Facebook မျှဝေပါ TwitterShare တွင်ဝေမျှပါလက်ဆောင်ကဒ်များ၊ အေးခဲနေသောဒိုးနက်များ၊ ဘီယာအခမဲ့၊ အားကစားပွဲများအတွက်လက်မှတ်များ၊ ဒေါ်လာတစ်သန်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်ပညာသင်ဆုတစ်ခု - အကယ်၍ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ရွေးချယ်ပါက၎င်းဆုများထဲမှတစ်ခုသည်သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင် ကိုဗစ် 19။ အိုဟ...
စာ: Mick Marchington ၏နာရေးကျွောငွာ
2021-06-15 10:54:43 | ပညာရေး...
ငါ Prest Polytechnic (ယခုဗဟို Lancashire တက္ကသိုလ်) တွင် 1980 ခုနှစ်တွင် Mick Marchington နှင့်အတူလေ့လာသင်ယူဖို့ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်, သူ၏စက်မှုဇုန်ဆက်ဆံရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အကြားဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှစ် ဦး စလုံးအတွက်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏အကြောင်းအရာ၊ ပါရမီရှင်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူနှင့...
2021-06-14 23:29:49 | ပညာရေး...
ဗြိတိန်၏စာမေးပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူများကပြီးခဲ့သည့်နှစ် A အဆင့်ကိုဖယ်ရှားလိုသော်လည်းအစိုးရနှင့်“ စကားမပြောနိုင်သော” ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းကိုစွန့်လွှတ်မည့်အစားလျှော့ချခဲ့သည်။ Ofqual ဥက္ကဌရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီးပထမ ဦး ဆုံး Roger Taylor ကစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူသည်အရည်အချင်းမပြည့်မီသောထွက်ခွာခွင့်လက...
2021-06-13 23:18:13 | ပညာရေး...
Linkedin တရားရုံးများမှသူသည်လူဖြူလူဖြူများအားသူတို့၏လူမျိုးများဖြစ်သောကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေများမှထုတ်ပယ်ခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူနားထောင်မှာလား။ (Drew Angerer / Getty Images မှဓာတ်ပုံ။ ) Getty Images ကျွန်ုပ်၏ယခင်ဆောင်းပါး၌ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့အစိုးရသည်လူဖြူများနှင့်တခါတရံတွင်အာရှအမေရိ...
ဇွန်လသည် Duke၊ Cornell၊ အနောက်မီချီဂန်နှင့် Utah တက္ကသိုလ်မှသမိုင်းဝင်လက်ဆောင်များကိုကြည့်ရှုသည်
2021-06-13 14:50:23 | ပညာရေး...
Linkedin တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်မျှဝေပါ LinkShin on TwitterShare တွင်မျှဝေပါအဓိကတက္ကသိုလ်လေးခုက၎င်းတို့သည်သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂလိကအလှူငွေများကိုလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပတ်အတွင်းကလက်ခံရရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးပရဟိတအတွက်စံချိန်တင်လအဖြစ်ဇွန်လသည်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပတ်အတွင်းတွင်ပင်အဖွဲ့အ...
2021-06-13 09:33:09 | ပညာရေး...
Facebook တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင် TwitterShare တွင်ဝေမျှပါ။ Careful. getty ဖလော်ရီဒါသည်စာသင်ခန်းများတွင်အရေးပါသောပြိုင်ပွဲသီအိုရီကိုတားမြစ်သည့်ပြည်နယ်များစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရှိစာသင်ခန်းများအပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ အခြားပြည်နယ်များသည်“ ကွဲပြားသောအတွေးအခေါ်များ”...
ကျူရှင်ဆရာများသည်နေ့တိုင်းပြောင်းလဲ: ကျောင်းအကြီးအကဲများကအင်္ဂလန်တွင် covid ဖမ်းဆီးရမိသောပိုက်ဆံကိုထိန်းချုပ်ရန်ကျောင်းများသို့ခေါ်ယူသည်
2021-06-12 22:02:02 | ပညာရေး...
ကျောင်းများအတွက် Covid ပြန်ဆပ်ရန်ပုံငွေကိုအစိုးရကပထမဆုံးကြေငြာလိုက်သောအခါ Oxfordshire ရှိ Abingdon ရှိ Thameside မူလတန်းကျောင်းမှကျောင်းအုပ်ကြီး Anna Grice သည်သူမမည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကိုချက်ချင်းသိသည်။ အစိုးရမှအတည်ပြုထားသောကုစားနည်းပြများစာရင်းတွင်ပံ့ပိုးပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Quest for Learning မှဖ...
ဝေဖန်လူမျိုးရေးသီအိုရီ - နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိမတူကွဲပြားသောမိခင်အုပ်စုများကပြောဆိုကြသည်
2021-06-12 17:01:34 | ပညာရေး...
"Critical Race Theory" ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်သတင်းခေါင်းစဉ်များနှင့်သတင်းသံသရာများကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်ဟူသောစကားစုကိုတက္ကသိုလ်ခန်းမများသို့ပို့ချလိုက်သည်။ CRT နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်သောအတွေးအခေါ်များသည်ကျောင်းခရိုင်များသို့ပြန့်နှံ့သွားသည်နှင့်အမျှသက်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆွေးနွေးသူများ၏လူ ဦး ရေစာရင်းသ...